डिएनए रिपोर्ट आएन : समाचार सार, रियल समाचार… « Gajureal
डिएनए रिपोर्ट आएन : समाचार सार, रियल समाचार…
प्रकाशित मिति: १४ आश्विन २०७५, आईतवार ०५:०४
मापदण्डबिनै सञ्चालित भेटनरी कोर्षलाई नेपाल पशु चिकित्सा परिषदले मान्यता नदिने भएको छ। पूर्वाअञ्चल विश्वविद्यालयले मापदण्ड पूरा नगरेका कलेजमा उक्त बिषय संग सम्वन्धित भर्ना आह्वान गर्न थाले पछि परिषदले यो निर्णय लिएको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयको भनाई : डा.के सी सम्पर्कमा आएनन् । चिकित्साको सम्बन्धमा सरकार र डा. के सी बिच भएको सहमतिको बिषयमा र हाल सो बिधेयक अघि नबढेको प्रति डा. के सीको असहमति बारे बुझ्न मन्त्रालयले वाहकों खोजी गरेको जानकारी बिज्ञप्ति मार्फत भनेको छ ।
राष्ट्रकबि माधव प्रसाद घिमिरेको सतबार्षिकी पारेर काठमाण्डौ महानगरपालिकाले वाहाँको अभिनन्दन गरेको छ । अभिनन्दन हुनु अघि घिमिरेलाइ वाहाँको निवास देखि कार्यक्रम स्थल, प्रदर्शनीमार्ग स्थित रास्ट्रीयसभा गृह्य सम्म रथ यात्रा गरिएको थियो ।
शुक्रबार इंडोनेसियामा ७.५ म्याग्निच्युटको भुकम्प गएको छ । भुकम्प पछि आएको सुनामिमा परी धेरै जनधनको क्षति भएको छ । जानकारिमा आएअनुसार सनिवार सम्ममा चार सयको मृत्यु भइ सकेको छ ।
निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा दोषीको आशंका गरिएका एस.पि.बिष्टसँगै आयुस र किरणको पनि डिएनए रिपोर्ट आयो । सरकारी बिदा परेकोले हिजो खोलिएन,आज खोलिने जानकारी ।